४८ घण्टा: लुटपाट, लागूऔषध र घुस काण्डमा समातिए चार प्रहरी | Citizen Post News
काठमाडौं । पछिल्लो ४८ घण्टामा नेपाल प्रहरीका सिपाहीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म विभिन्न काण्डमा मुछिए । जसले नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठामा ठूलो आँच पुगेको छ । जसमध्ये ललितपुर प्रहरी परिसरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक रुद्र शाहीलाई बुधबार लागूऔषध कारोबारीलाई सघाएको अभियोगमा प्रहरीकै लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गर्यो । ब्यूरोले लागूऔषध कारोबारीविरुद्ध चलाएको अपरेशनमाम पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले उनको नाम पोलेपछि उनी पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीकै अर्का प्रहरी निरीक्षक प्रकाशजंग कार्की जो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत थिए, उनलाई ५० हजार रुपैयाँ घुससहित अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्यो । कार्कीले सार्वजनिक र जबरजस्ती करणी मुद्दा मिलाउने नाममा बिचौलिया एक जना वकिलकै कार्यालयमा पुगेर रकम बुझेका थिए । सो क्रममा अख्तियारले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरेकोे थियो ।
त्यसैगरी, बुधबार न्यूरोडका अवैध हुण्डीका ब्यापारीको १० लाख लुटपाट गरेको अभियोगमा प्रहरीका दुई जना घुमुवा पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत घुमुवा धिरेन बिष्ट र २ नम्बर गण महाराजगंजमा कार्यरत सिपाही गणेश चन्द थिए । बिष्ट र चन्दमाथि न्यूरोडका अवैध हुण्डीका कालाबजारी विकास अग्रवालको १० लाख रुपैयाँ लुटेको अभियोग लागेको छ ।
विष्ट लामो समयदेखि परिसर र रानीपोखरीका हाकिमलाई रिजाएर त्यहाँ रहँदै आएका थिए । पछिल्लो ४८ घण्टाभित्र घटेका यी घटनालाई मध्यनजर राख्दै शुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने प्रहरीमा नैतिक विचलन आएको प्रष्ट देखिन्छ । सर्वसाधारणका नजरमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र सुब्वयस्था कायम राख्न खटिने प्रहरी नै अवैध धन्दामा लागेको प्रष्टिन्छ ।
घुस, लागूऔषध, लुटपाटका घटनामा प्रहरीका सिपाहीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म पक्राउ पर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा कम आँक्न सकिन्न । प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदा संगठनमा कस्तो असर पर्छ ? उदाहरणका रुपमा यी घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । ६ महिने आइजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको कार्याकाल सकिन दुई हप्ता पनि बाँकी नभएको बेला घटेका यी घटनाले ठूलो अर्थ राख्न सक्छ ।
आगामी नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व अब कस्तो ब्यक्तिलाई दिने ? बहस हुनुपर्छ । बरिष्ठतालाई हेरेर मात्र हुन्न, संगठन प्रमुख छान्दा योग्यता, दक्षता र नेतृत्व लिने क्षमतालाई पनि हेरिनुपर्छ भन्ने सन्देश यी घटनाले दिएको छ ।